अविरल धोकेबाज हो । रक्तकुण्ड प्रकाशन गर्ने बेलामा जसलाई प्रकाशन गर्न दिने भनिएको थियो, उसैलाई धोका दिएर पुस्तक प्रकाशन गर्‍यो ।
त्यस्तो देखिन सक्छ । तर मैले उपन्यासमा तथ्य लेखेको छु । माओवादीबारे जति सूचना मसम्म आएका छन्, त्यसको १० प्रतिशतमात्रै मैले ‘रक्तबीज’मा हालेको छु । म त अब प्रचण्डमाथि नै अर्को उपन्यास लेख्न खोज्दैछु । उनीहरुले गरेको राम्रो पक्ष छ, उनीहरुले जुन चेतनाको लहर ल्याए, त्यो राम्रो हो । तर नकारात्मक पक्ष धेरै भए । जो जनयुद्ध लडेका, भोगेका र घाइतेहरुको बिचल्ली भइरहेको बेला जसरी नेताहरुमा नवसामन्तवाद मौलाएको छ नि, त्यसको भण्डाफोर गर्ने काम त भएकै छैन । मलाई नपचेको कुराचाहिं त्यो हो । ‘कमाओवादी पार्टीको पोस्टमार्टम’ भन्ने अर्को किताब लेख्ने क्रममा तयार गरेको सामग्रीको दशांस यसमा प्रयोग गरेको हुँ । बाँकी तथ्य त्यसमा आउँछ । म आफ्नो तथ्यमा ढुक्क छु । आफ्नो आत्मालाई नढाटी इमान्दार भएर लेख्दा पनि कसैले पूर्वाग्रही भन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन । कसैले पूर्वाग्रही देख्नु उसको दृष्टि हो । कसैलाई देख्नै हुँदैन भनेर लाद्नु त फेरि माओवादी प्रवृत्ति हुन्छ । त्यो म चाहन्न ।
दरबार नभएको भए कृष्ण अविरल लेखक नै हुने थिएन । दरबारको कुरा लेखेरमात्रै चर्चामा आएको हो । मैले दरबारको कुरामात्रै लेखेको छैन । लालचुडी, विषपुरुष र जल्लादको मनलाई पनि पाठकले मन पराएका छन् । मसँगबाट पाठकले मायाप्रेम, शोषण, अत्याचारका कुराभन्दा पनि अनुसन्धानको कुरा खोज्दा रहेछन् । मैले त्यही बाटो अपनाएको हुँ । त्यसै क्रममा दरबारको बिषयमा पनि लेखेको हुँ ।
पत्रकारितामा खासै सफल नभएको कारण त्यसले निर्माण गरेको छिद्र खोजेर अविरल लेखक भएको हो
असफल भनूँ भने मैले ल्याएको मान्छेहरु यो देशका सबभन्दा ठूलो सम्पादक छन् । मैले लेखेका समाचारको अहिले पनि चर्चा हुन्छ । त्यसैले सफल या असफल कसरी छुट्याउने ? तर फेरि म सक्रिय पत्रकारितामा आउँछु । अहिले प्रकाशनमा लागेको छु, यसलाई स्थापित गरेपछि फेरि आउँछु । पत्रकारिता चटक्कै छोडेको चाहिं होइन ।
कृष्ण अविरल आफ्नो कृतिबारे बढी नै हल्ला गर्छ
कसरी हल्ला भयो र ? पछिल्लो उपन्यास ‘रक्तबीज’बारे मिडियामा एउटा समीक्षाबाहेक केही आएकै छैन । बिज्ञापन अलि–अलि गरेको छु । ‘प्रयोगशाला’को विज्ञापनमा २० लाख खर्च गरिएको थियो । ‘खुशी’मा १६ लाखको हाराहारी खर्च गरिएको थियो । मेरो त बल्ल डेढ लाख पुगेको छ । यसलाई के हल्ला भन्नु ?
साभार : खबरडबली